> Resource> DVD> Windows DVD Onye kere Ọ dịghị Sound Mgbe Burning DVD? Edozi.
Ọtụtụ ndị na-gụnyere gị nwere ike na-abịa gafee otu nsogbu: mgbe na-ere ọkụ vidiyo na DVD (karịsịa AVI videos) na Windows DVD Onye kere, ọ dịghị ụda ma oyiyi dị mma. Ke ibuotikọ emi, Aga m na-enye ọrụ na anọ avaiable ngwọta dozie Windows DVD Onye kere dịghị ụda nsogbu.
Rịba ama na mbụ ngwọta ike ka ị na zere nke a nsogbu, na-enyere gị aka imeta ihe mgbaru ọsọ nke buring DVD ọsọ ọsọ na mfe. Ya mere, ọ bụrụ na i nwere ike ime na-enweghị Windows DVD Onye kere, ị pụrụ iji a mma DVD ọkụ ngwá ọrụ - Wondershare DVD Onye Okike. A na ngwa na-akwado ihe ọ video format ọsọ ọsọ na niile ewu recordable diski ụdị: DVD-5 na DVD-9; DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-R DL, DVD-Ram. Ọtụtụ ihe, ọ na-arụ ọrụ ndị ọzọ stably na ime ihe dị nnọọ mfe. Dị nnọọ na-eso nduzi n'okpuru isure ọ bụla video ka DVD.
Iji tinye video faịlụ, ị dị nnọọ pịa "+ Import" button na nke a ngwa si ebi ndụ iji mara na videos ị chọrọ. Ọ bụrụ na mkpa, pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala nke a window re-ndokwa ndị a kwukwara videos.
Na menu window, họrọ otu n'ime ọkacha mmasị gị DVD menu ndebiri hazie gị onwe gị DVD menu nanị site agbakwunye buttons, ederede, oyiyi, ma ọ bụ n'okirikiri wdg (Cheta: a na ngwa na-awade a otutu video edezi ngwaọrụ.)
Ịhụchalụ gị oru ngo. Mgbe ahụ, fanye a ide DVD diski, na-aga "Ọkụ" window, tinye akara "Ọkụ ka diski" nhọrọ na pịa "Ọkụ" button na ala nri akuku nke a window. Ọ gwụla. A mgbe e mesịrị, ị ga-enweta a writen DVD diski.
Iji kpochapụ nsogbu gị juputara, m ike ikwu na Wondershare DVD Onye Okike. Na ya, ị ga-gakwaghị botherd site Windows DVD Onye kere dịghị ụda nke. N'ezie, ị nwere ike họrọ na-nsogbu na-agbalị ọzọ ngwọta n'okpuru.
Ngwọta abụọ: Weghachi Windows DVD Onye kere ntọala.
Mgbe ụfọdụ, ọdịyo na video nzacha nwere ike ime ka Windows DVD Onye kere audio nsogbu. Ya mere, i nwere ike ịgbalị iji weghachi a na ngwa si ntọala ụlọ ọrụ ndabara ntọala. Iji mee ya, ị dị nnọọ oghe Windows DVD Onye kere, wee pịa "Ngwaọrụ"> "Nhọrọ"> "Ndakọrịta"> "Weghachi All Defauts". Ke akpatre, Malitegharịa ekwentị ya ma na-agbalị ọkụ a DVD ịhụ ma Windows DVD Onye kere ụda nsogbu e ofu.
Ngwọta atọ: Lelee audio codec na ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ị ịhụchalụ gị video na Windows DVD Onye kere na e nweghị ụda, eleghị anya ị na-adịghị wụnye ọhụrụ ọkwọ ụgbọala maka gị ọdịyo na ngwaọrụ, ma ọ bụ ụfọdụ audio codecs na-efu. N'ihi na nke mbụ, i nwere ike ịgbalị imelite ọkwọ ụgbọala idozi nsogbu a. biko gaa ozi ndị ọzọ. N'ihi na nke ikpeazụ, ị nwere ike ibudata na wụnye ọhụrụ audio codec maka Windows DVD Onye kere si: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx.
Ngwọta anọ: Lelee gị DVD diski
Mgbe gị na DVD ọkpụkpọ anaghị akwado na DVD typle ị nsure ọkụ na Windows DVD Onye kere, àjà-nsure-DVD diski ga-omume na-egwuri na-enweghị ụda na DVD ọkpụkpọ. Nanị ihe ngwọta bụ ịgbanwe a na-akwado DVD diski isure (dị ka DVD-R ma ọ bụ DVD + R wdg).